Farany Ny Teknolojia | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Farany Ny Teknolojia
Fitetezana Ny Lahatsary Sady Mpampianatra Solosaina Mazava Ho Azy
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > Farany Ny Teknolojia
Lasa Solosaina Savvy Dia Tsy Mbola Nisy Izany Tsotra! Lahatsary sady Mpampianatra no voalohany nalefa tamin'ny alalan'ny infomercials, ary ny firahalahiana volombatolalaka haired Dr, i Phil jereo-alike no endrika fantatra sy eken'ny vahoaka. Amin'izao fotoana solosaina taonany, izany dia manohintohina izay olona rehetra mahafantatra ny fomba fampiasana fandaharan'asa tahaka ny Microsoft Windows, Ny Microsoft Word sy Microsoft Excel. Raha toa ianao ka tsy, ianao dia nivoaka ny dian -, nilaozan'ny toetr'andro sy tsy ao amin'ny asa hery. Miaraka amin'ny maro ny olona nisafidy ho toeram-pivarotana sy hianatra ny an-tserasera, ...
PC Ary Fanohanana Amin'ny fomba Tsotra ny teny anglisy Azafady
Amin'ny PC ary ny fanohanana maro ireo orinasa madinika matetika mahita ny fandaniana ary tsy maro ny tombontsoa. Na izany aza inona no mety hahatonga ny olana lehibe indrindra ho an'ny fandraharahana madinika mividy IZANY no mahatonga ny fitaovana. Ny antony io indrindra ny PC ? Nahoana no mpizara? Inona no mpizara ary nahoana aho no manana iray? Ny tombony dia tsy foana mazava ho tsy ara-teknika ireo mpampiasa. Mahafantatra ny zavatra tombony farany ny teknolojia ny mety ho tena doesnt maninona raha tianao ny hanazava ny hetra na manahy ianao aiza ny fiarabe ireo. Mihevitra aho fa misy...
Ny Tombontsoa Na Voip Ny Rindranasa
Maro ny vaovao endrika ny haitao misy sy ny maro amin'izy ireo dia tsy hoe ho afaka anao hitsitsy vola, nefa koa tena hanampy ny asanao fiainana. Ny iray vao haingana endrika teknolojia dia ny rindranasa na voip. Izany dia miantso ny rafitra izay mamela anao hijanona mifandray amin'ireo namana, ny fianakaviana, miasa sy mpiara-miasa amin'ny alalan'ny solosainao. Ny Rafitra Izay Mitana Anao Hikasika na voip ny rindranasa no tena ilaina. Ireny dia mamela anao mba miresaka amin'ny olona eo amin'ny solosaina fa tsy noho ny...
Ny fisafidiana Iray LG HAZAVAN'NY TV
Ny fipoahana amin'ny lazany ny trano cinema tsena tato anatin'ny taona vitsivitsy, fandrosoana eo amin'ny teknolojia eto amin'ity faritra ity no nanao izany aza dia mora kokoa ny manodidina anao tamin'ny farany kasinga ao amin'ny iray misy inexpensive vidiny. Iray toy izany voarafitra indrindra dia ny rano crystal seho (HAZAVAN'NY) TV ny, ary koreana mpanamboatra azy LG dia iray amin'ireo mitarika ny ohatra. Amin'ny alalan'ny filozofia manome ireo mpampiasa ireo vokatra na practicality sy ny hatsarana, ny taranaka farany amin'ny HAZAVAN'NY FAHITALAVITRA avy any...
Mahazo Anao Na Voip Headset Sy Reap Ny Tombontsoa
Ity lahatsoratra ity dia ao amin'ny zavatra iray na voip headset ary ahoana no mety tombony ho anao, na amin'ny asa na an-trano ny tontolo iainana. Ny zavatra iray na voip headset sy ny fomba ve izany ny asa? Na voip ([object Window]) iray amin'ireo vaovao ny ankizy momba ny sakana tao amin'ny fifandraisana teknolojia, mampiasa ny Aterineto fa tsy nentim-paharazana ny antso an-tariby ny hanao sy handray antso an-tariby. Azonao atao ny antso hafa sy ny manana azy ireo hiantso anao nanome izany ianao dia samy manana ny ilaina software momba ny solosaina, izay malalaka d...
Dur dia tsy volatile fitahirizana data periferika fa mitahiry elektronika data amin'ny magnetic nanapahan-layered an-dur platters. Teny Sarotra no ampiasaina mba hanavahana azy avy malefaka, na zana-kapila angamba ny kapila. Sarotra disks mamaritra bebe kokoa ny angona ary afaka mitahiry avy 10 mihoatra ny 100 [object Window], raha be indrindra floppies manana ny ambony indrindra fitahirizana haavom 1.4 megabytes ary ankoatra izany dia haingana loatra.
Fivoriana Ary Miantso Ny Finday | Ny Farany Dia Ny Fifandraisana Teknolojia Ho An'ny Ny Fandraharahana
Azonao atao ny manantena crystal mazava tsara ny feo tsara kalitao avy amin'ny farany taranaka fivoriana ary miantso ny finday. Ny farany dia any ny fifandraisana teknolojia toy ny mampiasa tariby sy ny fiber optics no revolutionizing ny fomba izahay mifandray amin'ny taonjato faha-21. Nefa raha ny laharam-pahamehana ho an'ny ankamaroan'ny mpandraharaha fivoriana antso mikasa hiteraka tight tetibola, ny fiarovana tokony ihany koa ho voamarina carefully. Indrindra fivoriana hiantso ireo orinasa hanome 1800 ny isa sy ny manam-paharoa ny filaminana nampiasa ny fango izany fa ireo mpampiasa mety efijery sy hanamarina c...
Finday Na Blackberry?
Rehefa raisintsika raha hividy finday na blackberry, iray amin'ireo tena manan-danja dia manasongadina ny mba mihevitra dia finday teknolojia. Raha blackberries mbola nivoaka manaova ny nentim-paharazana ny finday, finday teknolojia haingana dia haingana mijery. Miaraka amin'ny finday ny fahafaha-tsoratra, [object Window], hafatra enoho eo, ary na dia nikajy ny paka isan-jato tao amina trano fisakafoanana iray, ny teknolojia dia ny fahafahana malalaka ahitana ny ankamaroan'ny olona. Blackberries dia manana lehibe habetsahan'ny ara-teknolojika...
Eny ary ianao izao no lasa ny certification fitsapana, arahabaina! Amin'izao fotoana inona? Ahoana izany mandeha mba tena hanatsara ny fiainana, ny asako? Ianao no nieritreritra ny momba ny drafitra rehefa ianao no lany amin'ny fitsapana? Ho an'ny maro maka certification fanadinana fotsiny stepping vato ho marina ny fahombiazana.
Ny Farany Indrindra Amin'ny Teknolojia, Wifi Sy Ny Fakan
Isika rehetra no ampiasao ny hevitra fandefasana ny horonantsary ho an'ny fampandrosoana sy miandry ny sary mba hiverina. Izy io dia maka ny andro mialoha isika dia afaka mahita ireo mivoatra ny sary.
7 Toro-Hevitra Ho An'ny Mividy Mora Laptop
Solosaina finday dia gaining tany ny lazany ireo andro. Saika ny rehetra dia nitondra ny iray amin'izao fotoana izao na amin'ny asany na ny fialam-boly. Solosaina fitondra mandehandeha ny farany ny teknolojia no nampiditra ny tsena andavanandro sy ireny vaovao ny solosaina finday niaraka tamin'ny be ny vidin'ny tag. Na dia izany aza, fa tsy midika hoe tsy afaka mahazo ny tsara sy ny solosaina finday mora vidy. Aho no niara-torolalana izay mety hanampy anao nivoaka any ny mihaza ho mora ary tsara laptop.
Dia Raitra Momba Ny Finday Finday Tena Ilaina?
Weve rehetra nahita azy ireo, ary ny sasany amintsika dia mety aza manokana onea finday fa efa maro ny fananana fahaiza-manao mihoatra ny iray tokony ho izy antso an-tariby. Ny sasany mety misy camera, lalao, ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, manga nify periferika, [object Window], ary na lahatsary recorders, izay mandefa ny mpampiasa azy mamorona fanjakana kely sarimihetsika an-trano. Inona no tanjon'ny rehetra rehetra ireny fananana fahaiza-manao, ary izy ireo no tena ilaina? Koa mazava ho azy, misy ny manohitra ny heviny momba izany. Ny olona sasany dia old-school, midika izany ry zareo tsy tena ...
Tsy misy afaka mandà fa finday (momba ny finday) hitranga mba ho iray tena nangataka taorian'ny sy malaza kasinga rehetra manerana izao tontolo izao. Mety ve ny mandeha an-tsekoly ny zanakao, na matured birao handeha lehilahy, izay tsy tia flaunt lafo indrindra finday?!
Inona no Hanodidina Peo sy ny Antony Tianao Izany?
Trano fanaovana teatra singa orinasa mpamokatra sy salesmen dia foana ny miresaka momba 'ny hanodidina peo ity,' ary 'manodidina ny feo fa', nefa ve ianao tena mahafantatra ny zavatra tiany hambara?
Upgrading Ny Fiarovana Ny Rafitra
Rehefa fiarovana ny rafi-nikapoka an-tsena, ianao angamba tsapa pretty azo antoka ary nihevitra ianareo no iray amin'ireo sangany izay mety ho voavidy toy izany rafitra. Ny olana dia ny hoe maro ireny ny rafi no horribly nilaozan'ny toetr'andro sy tsy miaro ny fandraisanao ny fomba maro ny vaovao ny rafi-dia. Angamba ny fotoana iray navaozina? Raha ny marina, maro ny vaovao advancements ao an-trano fiarovana ireny andro ireny fa ianao tena tsy te-ho tafahitsoka miaraka amin'ny mihoatra ny rafitra izay mety ho tsy hiaro anao intsony...
[object Window], araka ny voalazan'ny rakibolana midika dia ny jeneraly lalàna, fitondrany, foto-kevitra na sivana; fiangonana didy na lalàna; mpikambana ao amin'ny katedraly toko; ny vatana asa sorany nanaiky ho tena marina.
Solosaina Amidy – Fanampim-baovao
Ianao no nividy solosaina mbola? Tsy misy, Izaho tsy miresaka ny momba izany taloha Tandy mamaritra fa ny stashed lavitra any ny attic. Aho miresaka momba ny endrika vaovao solosaina. Zavatra amin'ny Aterineto sy ny fifandraisana tsy misy mpampitohy fananana fahaiza-manao. Ok, Izaho angamba fandehanana iray tad lavitra loatra amin'ny spiel, fa ianao ve te-hanao antoka ny PC na ny Mac dia hatramin'ny zara raha. Io no hany fomba ianao dia afaka mankafy ny farany ny teknolojia. Fantatrao ve ny toerana izay mba hizaha mikaroka solosaina amidy? Raha ny marina, ianao angamba ha...
Inona Ianao Dia Mila Mahafantatra Ny Momba Ny Maimaim-Poana Adware Fanalana Ny Software
Fiarovana ny solosaina avy amin'ny adware dia tena iankinan'ny ain-dehibe ianao raha toa ka te hitazona azy mandeha araka ny tokony ho izy. Ny fananana adware amin'ny solosainao dia afaka ihany koa ny hanohintohina ny mombamomba anao raha izany no avo lenta ampy. Spyware dia ny kinovan'ny adware fa afaka mamaky teny fanalahidy sy ny fidirana amin'ny aterineto ny kaonty avy any ambadiky ny sehatra. Farafaharatsiny ireo rehetra pop tafalatsaka no tena an'izany raha ianao no mampiasa ny solosaina. Tsy tsindrio ny misy azy ireo satria io no dingana voalohany mba infecting ny solosaina miaraka adwa...
Smartphone – Ry Zareo No Manao Izany Rehetra Ho Anao
Eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, olona an-tapitrisany no tsy heno mihitsy ny Smartphone. Izy ireo dia tsy mampino avy eo ny teknolojia fa izay kely ampy mba hanao ao ny lafiny iray, na izany aza anefa ry zareo dia manana ny capability iray ambony ny andalana solosaina. Smartphone dia fantatra ihany koa ho toy ny Finday. Nanomboka ny inception, Smartphone no nitombo tamin'ny times. Ny teknolojia ny voalohany finday dia paled raha oharina amin'ny todays finday.
CD Famantaranandro Radio – Manokana Review.
Parvo Free Antivirus Fiarovana Adware Fanalana Ny Spyware Fitaovana
Misy Lisitra Feno Kojakoja Ho Anao Laptop
Laptop Ny Fanamboarana
[object Window]: Ahoana No Tsy Niloka Mifandraika amin'ny Fahafinaretana
5 Ny Zavatra Ho Fantatra Rehefa Mividy Vaovao Iray Mpanonta Printy
Prepaid Flip Finday
Zaza Dia Mangataka Ny Toro-Làlana. Tsy misy mpampitohy AMBER Fanairana Put tsy misy mpampitohy Fitaovana Ampiasaina
Trano Fanaovana Teatra Fitenenana Hanintonana Mpijery
Dorm Miaina Fiainana Milamina: Ny Fomba Furnish Ny Dorm Efitra Tsy Misy Ny Famonoana Ny Roommate
Ve Isika Tena Mila Ny Ranomainty?
Mahafantatra Ny Playstation 2